U-Anarchism kunye noBugcisa be-Anarchist
AbaAnarchist baqeshwe "Ipropaganda yeSenzo"
I-Anarchism yayinomxholo wekhulu le-19 phakathi kweYurophu, iRashiya kunye namaMerika, ukuba wonke urhulumente kufuneka apheliswe, kwaye ukusebenzisana ngokuzithandela, kunokunyanzelisa, kufuneka kube ngumgaqo-nkqubo wombutho. Igama ngokwalo livela kwigama lesiGrike, i- anarkos , elithetha "ngaphandle kwenkosi." Inkqubela yayivela ekukhangekeni kwindlela yokunika iiklasi zesebenzi yezopolitiko ilizwi kwizentlalo zabo.
Ekupheleni kwekhulu lama-20, i-anarchism yayisele iqhubekile, iyakuthatyathwa ngamanye amaninzi ukukhuthaza amalungelo okufundela kunye nokuguqulwa kwamalungelo.
Inani labalandeli bexesha le-19 leminyaka ekugqibeleni baxela ukuba izenzo, kunokuba ngamazwi, yindlela efanelekileyo yokusasaza iingcamango. Kwabanye, kuthethwa ngogonyamelo lwentsebenziswano, ngelixa abanye babhekisela ekubulaleni nasekubhubhiseni okwenziwe ngabahlalutyi. Kwathathwa ngaba-anarchists ukuchaza ukubulawa kwabantu kunye neembhobho.
Ugqirha lwe-Anarchist "
Ngasekupheleni kweXesha le-19 kwakuboniswa ngogonyamelo lwezopolitiko oluphefumlelwe yimibono ye-antiarchist eyayibhalwe ngokukhawuleza ngobungqisholi:
1881: ukubulawa kweRussia Tsar Alexander II, ngeqela laseNarodnaya Volya
1894: ukubulawa komongameli waseFransi Marie-Francois Sadi Carnot
1894: Ukuqhubhisa ibhokhwe ye-Greenwich Observatory eLondon
1901: ukubulawa kukaMongameli waseMelika uWilliam McKinley ngoSeptemba 1901, ngu-antiarchist, uLeon Czolgosz.
Laba babulawa babangela ukwesaba phakathi koorhulumente ukuba kwakukho inceba enkulu yamazwe omhlaba. Enyanisweni, akuzange kubekho omnye.
Funda ngakumbi: Narodnaya Volya
I-Anarchists Namhlanje: Akukho Ukuxhatshazwa kwiNkqenkquthela yezeNkolo okanye kwiMfazwe esebhubeni
Aba-Anarchists baxela ukuba akufanele bathathwe njengongcangcazela, okanye badibaniswe nobutyhishino.
Amabango abo anengqiqo: ngenye into, ininzi yeengcaphephe ngokwenene imelene nokusetyenziswa kogonyamelo ukufezekisa iinjongo zezopolitiko, kwaye enye, ubundlobongela be-anarchists bebuxhomekeke kwimbali kwizombusazwe, kungekhona abantu, njengobungqonge.
Kwinqaku eyahlukileyo, uRick Coolsaet ukhombisa ukuba kukho umfanekiso owenziwe phakathi kwexesha elidlulileyo nelikhoyo.
AmaSilamsi athatyathwa ngoku njengomxube ofanayo wokwesaba nokudelelwa njengokuba abasebenzi bekhulu le-19. Kwaye i-jihad isigidimi sinemvakalelo efanayo ngeMelika njengoko i-antiarchist eyayihamba phambili yayinokuthi ibhenjiwe: uyibona njengesiqendu sokuzikhukhumeza namandla. U-Osama bin Laden unenkulungwane ye-21 uRavachol, uphawu oluphilileyo lwenzondo kunye nokuchasana kwabalandeli bakhe, i-bogeyman yamapolisa kunye neenkonzo zengqondo. I-jihadis i-ioday ifana neyi-antiarchists: eqinisweni, ininzi yamaqela amancinci; ngamehlo abo, i-vanguard idibanisa abantu abaxinzezelekileyo (5). I-Saudi Arabia sele ithathe indima ye-Itali ngo-11 kuSeptemba 2001 yinguqulelo yanamhlanje ka-24 Juni 1894, ukunyuka kwe-intanethi kummandla wamazwe ngamazwe.
Izizathu zokuphakama kobugrogho ngoku kunye ne-anarchism ziye zafana. AmaSulumane ehlabathini lonke ahlangene ngoluvo lokungahlali kunye neengxaki. Ihlabathi le-Arabhu libonakala libuhlungu ngakumbi, lingenangqiqo kwaye lingaqulunqwa kangangoko kunokuba kwakunjalo kuma-1980. Kukhona ingqondo ekhulayo yokubambisana namanye amaSulumane, ukuziva ukuba i-Islam ngokwayo isengozini. Lo mhlaba ovuthiweyo weqela elincinci.
Funda ngakumbi kwi: Iinkcazo zoBugcisa ... Imbali yoBugcisa
'I-Ado eninzi malunga Nento' Abadlali
Thatha iNgcaciso kwi-Awards ye-CMA - Nantsi indlela abaphumeleleyo abakhethiweyo ngayo